Istanbul Tehran Break 3 Socdaalkii ugu caansanaa | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya98 IranIstanbul Tehran 3 Safar ugu Caansan
09 / 01 / 2020 98 Iran, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Garoomada, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Qaabka ugu caansan ee loo maro istanbul iyo tehran
Markaad u safreyso Bariga Dhexe waxaad xaqiiqdii rabi doontaa inaad aado Istanbul oo aagga aad ku nooshahay aadna maalmo halkaas ku qaadatid. qiimihiisu Turkey ayaa booqasho waa xaqiiqda ah in Istanbul ay tahay magaalada kaliya. Waxaa jira waxyaabo badan oo dheeraad ah in lagu arko agagaarka Turkey, laakiin inta badan dalxiisayaasha waxaa boodayaa ugu iyaga ka mid ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad ugu dambeyntii dooneysaa inaad qaadatid fasax dheer, waxaadna u badan tahay inaad qorsheynaysid inaad u safarto laba ama saddex magaalooyin ama xitaa waddammo isku waqti ah. Istanbul iyo Tehran, Iran iyo Turkey yihiin meelaha caanka ah dalxiiska. Waxaa jira 3 dariiqood oo ugu caansan oo lagu tegi karo magaalada Tehran ee ka socota Istanbul.
Sida ugu fudud laakiin ugu qaalisan ee lagu tago Tehraan ee Istanbul waa diyaarad. Duullimaadyada tooska ah waxaa sameeya shirkadaha diyaaradaha waaweyn ee Turkiga. Qiimaha tigidhadu waxay ka bilowdaan $ 160 safarka wareega, waxay kuxirantahay hal xilli. Duulimaadka ayaa qaadanaya illaa 3-4 saacadood.
Gaaddi kale oo aad isticmaali karto si aad u gaadho Tehraan waa baska. Nasiib darrose, ma jiro bas toos ah oo ka yimaada Istaanbuul, marka waa inaad marka hore aaddaa Ankara oo aad tagtaa caasimadda Iiraan si aad u raadsato shirkad bas ka shaqeysa halkaas. Qiimuhu waa $ 100 hal dariiqo. Safarku wuxuu qaadanayaa wax ka badan 30 saacadood waana kan ugu yar ee raaxada leh 3 nooc oo kala duwan oo la bixiyo.
Ugu dambeyntiina waxaad tegi kartaa Tehran adiga oo ka duulaya Istanbul. Socotada waxay helayaan tareenka gaadiid ugu qaalisan uguna haboon. Safarrada noocan oo kale ah waxay noqon karaan wakhti qaadasho marka loo eego masaafada laakiin sidoo kale waa abaal marin. Waxaa jira sababo badan oo dadku u doorbidayaan tareenka habka kale ee gaadiidka inta ay safrayaan. Mid ka mid ah kuwan waa kuraasta waaweyn ee loo beddelo sariiraha habeenkii iyo raaxada inta lagu jiro safarka dhaadheer ee aad ku fidi karto halkii aad ku dhex milmi lahayd kursi diyaarad heerkeedu sareeyo. Magaca Transasia Express siiyo dalka Turkiga oo Ankara leeyihiin wadada isku xirta weheliyaan Lake Van iyo Tehran. Safarku wuxuu ka kooban yahay 3 khibrado kala duwan. Kuwaani waxay ka kooban yihiin laba safar oo tareen iyo hal doon. Intaa waxaa dheer, gaadiid ka yimaada Istanbul ilaa Ankara waxaa bixiya tareen xawaare sare leh. Socotada waxay dooranayaan safarka tareenka iyadoo la adeegsanayo Transasia Express iyagoo uga mahadcelinaya khibradooda. Rakaabka safarka ku socdaalayaa waxay kufiican yihiin indha indheynta seenyooyinka cajiibka ah, aragtiyo aad u wanaagsan iyo biyaha Lake Van, la kulanka dadka xiisaha leh, dadka saaxiibka la ah iyo dalxiisayaasha khibradda leh, iyo sidoo kale ku raaxeysiga xornimada iyo xasilloonida dabeecadda. Hubi tigidhada la heli karo halkan (Transasiatra ah) u diyaar garow hiwaayad cusub.
Xarunta ugu caansan ee lagu ciyaaro ee America
'Stylish' Furitaanka Bandhigga Muuqaalka Popular Uludağ
Iran ayaa Istanbul ka dhigeysa tusaale Tusaale ahaan Jarmalka
Khariidadda Tehran Metro
72 saacad kasta oo tareen leh ...
Tehran ayaa filaysa in tallaabooyin ka yimaada magaalada Yerevan ee loo maro tareenka Iran-Armenia
Tehran - Mashhad Line Electrification project wuxuu maalgelin doonaa Shiinaha
Shirkadaha Shiinaha Saxiixa Heshiiska Mashat Electrification
Tehran ayaa diyaar u ah dhisitaanka dhismo tareen oo ku yaala Armenia oo sugaya ilo dhaqaale
Safarka Istanbul Tehran
Iskuxiryada Basaska taga iyo ka imaanshaha Istanbul Tehran
Jadwalka tareenka Istanbul Tehran
Duulimaadyada Istanbul Tehran